6/22/2014 10:28:00 AM political-news
ဒေါ်စု သမ္မတ ဖြစ်သင့် မဖြစ်သင့်ဆိုတဲ့ ပိုစ့်အောက်မှာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ရေးထားတဲ့သူတွေရဲ့ ကွန်မက်တော်တော်များများမှာ သူမဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားလို့၊ ဘာသာခြားအရေးပေးလို့ စတဲ့ အကြောင်းအရာကို အခြေခံပြီး ပြောတာများတယ်။ ဒါဆို သူမဟာ တကယ်ဘဲ အဲလိုဖြစ်နေလား…. တကယ်ဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ရန်သူလား…. ကိုယ့်လူမျိုးကို အရေးမပေးဘူးတဲ့လား…. ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက် တချက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ….
ထိုအချိန်က ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေနဲ့ ရခိုင်နဲ့ ပြသနာဖြစ်ပွားချိန်၊ အိမ်တွေ မီးရှို့ လူတွေသတ်နဲ့ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရဖြစ်ချိန်၊ ပြည်သူတွေက ဒီပြသနာအပေါ် ဒေါသထွက်ပြီး ရန်မီး အစပျိုးတော့မယ့်အချိန်၊ မသမာသူတစ်စုရဲ့ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် လမ်းကြောင်းလွဲ လှုံဆော်နေချိန်၊ သမ္မတလုပ်သူ ဦးသိန်းစိန်က သတင်းထုတ်ပြန်မှု၊ ပြည်သူလူထုကို မစိုးရိမ်ရန် ပြောဆို နှစ်သိမ့်မှု လုံးဝ မလုပ်ဘဲ ပစ်ထားချိန်.. အဲ့လို အချိန်မှာ အဲဒီအတိုင်းဘဲ ရှေ့ဆက်သွားရင် ရခိုင်မီးစဟာ တတိုင်းပြည်လုံးပျံ့နှံ့ပြီး စစ်ဘေး ကပ်ဘေး ကျရောက်လာမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘဲ။
အဲ့ဒီအချိန်ကျရင် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ချင်သူ တစ်စုက တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်လို့ မလွဲမရှောင်သာ စစ်အာဏာပြန်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီး ဖြစ်လာမယ်။ အဲ့လိုမျိုးဆို ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ခုချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ အရသာ လုံးလုံးခံစားရမှာမဟုတ်ဘဲ အရင်လို အာဏာရှင်လက်အောက်မှာဘဲ ပေးတာယူ ကျွေးတာစားဘဝနဲ့ နေနေရမှာ မလွဲပါဘူး။ ဒါတွေကို ကြိုမြင်တဲ့ ဒေါ်စုက ပြသနာပိုမကြီးလာခင်မှာ မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဝင်တားဖို့ သူလုပ်ရတော့မယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူမ ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲ ကြည့်ကြပါ။
ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဖက်ကို သွားနှစ်သိမ့်တယ်၊ လူနည်းစုကို လူများစုက အနိုင်မကျင့်ရဘူးလို့ ပြောသွားတယ်။ အဲ့လို ပြောအပြီးမှာ ဘာဖြစ်သွားလဲ…. ဒေါ်စုကို ထောက်ခံတဲ့ သူတွေထဲက ဒေါ်စု ဘာဖြစ်လို့ တခြားဖက်ပါရတာလဲ၊ ဒေါ်စုကို ငါတို့ဖက်က ထင်ထားတာ ခုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုပြီး တွေဝေကုန်တယ်။ တချိန်လုံး ချမယ် ဆော်မယ် တကဲကဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ဒေါ်စုစကားအပြီးမှာ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်လာကြတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ဒေါ်စုဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ အမျက်ဒေါသကို လူမျိုးရေး အဓိကရုန်းဆီ ဦးမတည်စေဘဲ သူ့အပေါ်ဘဲကျရောက်ပါစေတော့ဆိုပြီး လမ်းလွဲလိုက်တာဘဲ ဖြစ်တယ်။ ဂျောက်ထဲ ကျဖို့ လိမ့်နေတဲ့ကားကို ရှေ့ကနေ ဝင်ခံလိုက်တဲ့ သဘောပေါ့။
ဒါတွေက ရခိုင် ကိစ္စမကျေနပ်လို့ နီးစပ်ရာမဆိုင်တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို လူထုပြသနာရှာမှာစိုးလို့ ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ သဘောပါဘဲ။ လူထုဒေါသကနေ အဓိကရုန်းဖက်မရောက်အောင် လမ်းကြောင်းလွဲလိုက်တဲ့သဘောပါ။ ဒီလိုလုပ်လို့ သူမအပေါ် ထောက်ခံမှု ကျဆင်းကုန်မယ် ပြည်သူတွေ အမြင်စောင်းကုန်မယ်ဆိုတာ ဒေါ်စုအနေနဲ့ သိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ တိုင်းပြည် ပဋိပက္ခဖြစ်မှာ၊ စစ်အာဏာရှင်လက်ထဲ ထပ်ပြီးကျရောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်ပြီး ပြည်သူတွေ အပြစ်တင်ခံ၊ အတိုက်ခိုက်ခံပြီးတော့ကို မှန်ရာ ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီလို ဒေါ်စု လမ်းကြောင်းလွဲတောင်မှ နောက်ဆက်တွဲ မိထ္ထီလာ၊ လားရှိုး အစရှိတဲ့ မြို့တွေမှာ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်လာပါသေးတယ်။ ဖြစ်လာတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကလည်း နောက်ကြောင်းပြန်ချင်တဲ့ လူတစ်စုရဲ့ စနက်ပါတယ်ဆိုတာလည်း အားလုံးအသိဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ဒေါ်စု ဘာပြောသွားလဲ….. တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရှိရမယ်လို့ ပြောသွားတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိလို့ ဖြစ်တာ၊ ဘယ်သူမှားတယ် ဘယ်သူမှန်တယ် မပြောဘဲ အပြစ်ရှိရင် ရှိတဲ့ ဘင်္ဂလားဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ရခိုင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဥပဒေနဲ့ တိတိကျကျ အရေးယူဖို့ တိုက်တွန်းတာ။ ဒါဟာ ပြသနာရဲ့ တကယ့် main point ပါဘဲ။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ဘက်တစ်ဘက်ကို နင်းပြီးဖြေရှင်းရင် မြန်မာပြည်လို လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အဓိကရုန်းဖက်ကို ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်လို့ နစ်နာရင် တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေဘဲ နစ်နာမှာဖြစ်ပြီး အာဏာရှင်ဟောင်းတွေအတွက်တော့ စားပေါက်ရသွားမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက် အများစွပ်စွဲနေကြတဲ့ ဒေါ်စုက ဟိုဖက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို မမှန်ကြောင်း သူမ ဖြေရှင်းသွားတယ်။ “ကျွန်မ ရိုဟင်ဂျာကို မသိဘူး” ဆိုတဲ့ နိုင်ငံခြား အင်တာဗျူးမှာပါတဲ့ သူမရဲ့ ပါးနပ်တဲ့ အဖြေဟာ သူမရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်တာပါဘဲ။ ဒါဟာ ရခိုင်မှာ စိမ့်ဝင်နေတဲ့ ဘင်္ဂလားနိုင်ငံသားတွေကို ရိုဟင်ဂျာလို့ မသတ်မှတ်ဘူးဆိုပြီး အတိအလင်းပြောသွားတာပါ။ အင်မတန် ရှင်းလွန်းအားကြီးပါတယ်။
နောက်တချက်ရှိတာ ဒေါ်စုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် အန္တရယ်ဆိုရင် ဘာလို့ သီတဂူဆရာတော်လို ကမ္ဘာ့သာသနာပြု ဆရာတော်တွေ၊ အရှင်ဆန္ဒာဓိကလို အများကြည်ညိုရတဲ့ ဆရာတော်တွေ၊ ဒယ်အိုးဆရာတော်လို အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းဟောရဲတဲ့ ဆရာတော်တွေက ဘာလို့ဒေါ်စုဘက်မှာ ရပ်တည်နေရတာလဲ။ ဒေါ်စု သမ္မတဖြစ်ရင် ကုလားတိုင်းပြည်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီဆရာတော်တွေက ဘာလို့ ဒေါ်စုဘက်မှာ ရှိနေတာလဲ။ ဒါတချက်စဉ်းစားစရာပါ။ နောက်ပြီး ဒေါ်စုဟာ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသလို သူမကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးဆိုတာ ဒီလိုမျိုးဆိုပြီး ဂုဏ်တက်ရတာဘဲရှိပါတယ်။ ဒေါ်စုကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နာမည်ပျက်တာ မရှိဖူးပါဘူး။ သူမဟာ သံဃာတော်တွေကို မရိုက်ဘူး၊ ဝရမ်းပြေးအဖြစ် မဖမ်းဘူး၊ သေနတ်နဲ့ ပစ်ဖို့ အမိန့်မပေးဘူး၊ မီးလောင်ဗုံးတွေနဲ့ မပစ်ဘူး၊ ကျောင်းတွေ မသိမ်းဘူး၊ သိမ်တွေ မဖျက်ဘူး။ ဒီလိုမျိုးတောင်မှ သာသနာဖျက်မယ့်သူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျက်ဆီးမယ့်သူလို့စွပ်စွဲရင် ယုတ်တိရှိရဲ့လား…. သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် အဖြေ အရှင်းသားတွေ့ရမှာပါ။
ဒါမှ သဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင် ဒေါ်စုရဲ့ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ပါ။ လင်ယောင်္ကျား အင်္ဂလန်မှာ ရောဂါအခြေအနေဆိုးရွားပြီး ဆုံးခါနီးအချိန်တောင် မပြန်ဘဲနေတာ၊ ဖတဆိုး သား ၂ ယောက်ကို ပြန်မကြည့်အားဘဲ မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီအရေး တိုက်ပွဲဝင်နေတာ၊ အသက်အန္တရယ် ခြိမ်းခြောက်ခံရတဲ့ ဒီပဲယင်းလို အရေးအခင်းမျိုးကြုံလည်း နောက်မဆုတ်ဘဲ ဒီမိုကရေစီရရေး မမှိတ်မသုံကြိုးစားတာ၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ခံရလည်း ဘယ်တော့မှ အလျော့မပေးတာစတဲ့ သမိုင်းတွေကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့တာ ဘယ်သူ့အတွက်လဲ။ မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက်လား တိုင်းတပါးသားတွေ အတွက်လား။ ပြောမှာပေါ့ အာဏာရချင်လို့၊ ငွေမက်လို့၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကြီးဆုံးနေရာမှာနေပြီး စိတ်တိုင်းကျ ချယ်လှယ်ချင်လို့ဆိုပြီး။
ဒါဆို အဲ့ဒီ စွပ်စွဲချက်တွေ မှန်မမှန် တချက်ကြည့်ရအောင်။ သူမသာ တကယ် ငွေမက်ရင် မြန်မာပြည်က ထွက်ပြီး ကြိုက်တဲ့ နိုင်ငံကြီးမှာ သွားနေလို့ရတာပေါ့။ နိုင်ငံတိုင်းကလည်း သူမလို သြဇာတိက္ခမ ကြီးတဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးကို ကြိုဆိုပြီးသားဘဲ။ ငွေလိုချင်လား ပေးမှာဘဲ၊ အိမ်လိုချင်လား ပေးမှာဘဲ၊ ရာထူးလိုချင်လား လိုလိုလားလားနဲ့ကို ပေးအုံးမှာပါဘဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့နိုင်ငံတွေဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုး၊ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို အတိအကျ နားလည်လို့ပါဘဲ။ ဒါဆို သူမ ဘာလို့ ဒီနိုင်ငံမှာ အနစ်နာခံနေတာလဲ။ ဇိမ်နဲ့နေ ဇိမ်နဲ့သွားလို့ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို စိတ်မဝင်စားဘဲ ပြည်သူတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီရရေး ဘာလို့ ရုန်းကန်နေရတာလဲ။
ဒါကရှင်းနေပါပြီ။ သူမ ရာထူးကို မက်တာမဟုတ်ဘူး၊ ငွေကိုလည်း မက်တာမဟုတ်ဘူး။ သူမမက်တာ တိုင်းပြည် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ပြီး ပြည်သူပြည်သားအားလုံး တပ်မတော်ပါ မကျန် စည်းစည်းလုံးလုံး နေထိုင်ခွင့်ရတာကို မက်မောတာ။ ဒါကလည်း သူ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားတာပါဘဲ။ ဒေါ်စု ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်ဆုံးသွားလို့ ဖခင်နဲ့ သိပ်မနေလိုက်ရပေမယ့် ဖခင်ကျေးဇူးကို ဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည် ထူထောင်နိုင်ရေးအိပ်မက်ကို တတ်နိုင်သလောက် အကောင်အထည်ဖော်ရင်း ကျေးဇူးဆပ်နေတာပါဘဲ။ ဒီလောက်ဆိုရင် ဒေါ်စုအပေါ် တော်တော်လေး အမြင်ရှင်းလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ မှိုင်းတိုက်ခံထားရတဲ့ သူတွေ၊ အထင်လွဲနေတဲ့ သူတွေလည်း ဒေါ်စုအပေါ် အမြင်မှန် ပြန်ရပါတော့ဗျာ။ ၂၀၁၅ ဆိုတဲ့ ခရီးကြမ်းအတွက် တကွဲတပြားဖြစ်မနေဘဲ စုစည်းမှုဖြင့် အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ ခြေဥကို ပြင်ဆင်ပြီး ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည်သစ်ဆီ လျှောက်လှမ်းကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းရင် ဒီစာကို ဒီမှာဘဲ နိဂုံးချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
Credit: Ryo Miyaichan
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ ဇနီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ကျန်းကျန်းမာမာရှိ
6/22/2014 10:27:00 AM Myanmar-news
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ(ငြိမ်း)၏ ဇနီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ရန်ကုန် စစ်ဆေးရုံ၌ ယနေ့ (ဇွန်လ ၂၁ရက်) နံနက်က ဆုံးပါးသွားပြီဟု လူမှုကွန်ယက်တွင် သတင်းများ ပျံ့နှံ့လာ၍ ယခင် စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးကို မဇ္ဈိမက မေးမြန်းရာ အစိုးရနှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းက ယင်းသတင်းကို မကြားမိကြောင်းနှင့် ကျန်းကျန်းမာမာပင် ရှိနေကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်မှာ ရန်ကုန်မြို့၊ ဦးဝိဇာရလမ်းရှိ စစ်တပ်အရာရှိများ ကုသသည့် ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသလျက်သည်။
6/22/2014 10:26:00 AM singapore-news
Changi လေဆိပ်ကို အခေါက်ခေါက်အခါခါ ဖြတ်သန်းဖူးပေမယ့် ကမ္ဘာ့အဆင့် best airport award ဆုတွေရထားတဲ့ လေဆိပ်ကြီးအတွင်းမှာ ဘယ်လို Entertainment တွေရှိတယ်ဆိုတာ သတိမထားမိခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ် အမြဲတမ်း သုတ်ချည်တင်နေရလို့ပါ။
မကြာသေးမှီကမှ duty free ၀ယ်ဖို့ Airport website ကိုမွှေနှောက်ရင်း တွေ့မိသမျှ free entertainment ရတာလေးတွေကို ဘော်ဒါတွေ စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်လို့ ရှယ်လိုက်တယ်။
၁။ Sunflower garden
Terminal2အတွင်း တတိယအထပ်မှာရှိပါတယ်။ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတယ်။ နေကြာပန်းခင်းအပြင် ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ လေယဉ်ပျံ အကြီးစားကြီးတွေအပါအ၀င် နောက်ခံထားအမှတ်တရ ရိုက်ပြီး ရွာကအမျိုးတွေ ကြွားလို့ရတာပေါ့။ (ကြွားပြီးပြီ။)
၂။ Movie Theatre
Terminal2transit lounge တတိယထပ် နဲ့ Terminal3Department lounge တတိယထပ် မှာ ရှိပါတယ်။ တကယ့် ရုပ်ရှင်ရုံကြီး အပြင်အဆင်နဲ့မခြား ခုံ ၃၀ လောက်နဲ့ mini Theatre သဘောလေးဖန်တီးထားတာပါ။ Transit သုံးလေးနာရီလောက် အချိန်ဖြုန်းရမယ့် သူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ Free ဖြစ်ပြီး ခဏတော့ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ် T2 မှာ။
၃။ Gamer များအတွက် Entertainment Deck
Xbox Kinect Room, MTV booth, XBOX360 and Playstation3consoles, music area and the aforementioned movie theatre စတဲ့ နေရာတွေမှာ free ကစားလို့ရတယ်။ Terminal2အတွင်း level2မှာ ရှိပါတယ်။ ဂိမ်းစိတ်မ၀င်စားလို့ ကြည့်ရုံပဲကြည့်ခဲ့တယ်
၄။ Social Tree
Terminal 1 အတွင်းမှာပဲ ရှိပါတယ်။ photo booths ၈ ခုရှိပြီး ချက်ချင်းရိုက် ချက်ချင်းပို့ ချက်ချင်း facebook upload လုပ်လို့ရပါတယ်။ social tree က မိသားစုလိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရင် Airport history ဒါမှမဟုတ် မိသားစုအမှတ်တရအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အချိန်မရလို့ အများကြီး မစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပါ။
၅။ Rest area နဲ့ free message chairs
T1, T2, T3 အတွင်းနေရာတော်တော်များများမှာ ရှိပါတယ်။
၆။ Free Internet, Free Phone, free Wifi & free charging
T1, T2, T3 အတွင်းနေရာတော်တော်များများမှာ ရှိပါတယ်။ free Wifi သုံးမယ်ဆို ကိုယ့်ဖုန်နံပတ် ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ password ပို့ပေးပါလ်ိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် information counter ကနေ password ယူပြီးအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ ကောင်တာမှ မိန်းကလေးတွေ သဘောကောင်းပါတယ်။
၇။ Orchid garden
T2 အတွင်း level2မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်သူများစွာဖြင့် တွေ့ရပါတယ်။ သစ်ခွပန်းအစစ်များရေပန်းများဖြင့် တော်တော်အလှဆင်ထားပါတယ်။
၈။ the Xperience Zone
ဆိုဖာခုံ ကောင်းကောင်းနဲ့ latest sport news တွေကို ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း ကြည့်လို့ရတာ T2 အတွင်းမှာ ရှိပါတယ်။
၉။ Butterfly garden
T3 အတွင်း departure transit lounge Level2&3မှာ ရှိပါတယ်။ လိပ်ပြာအမျိုးအစားပေါင်း ၄၇ မျိုးနဲ့ အကောင်အရေ ၁၀၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၀။ Enchanted Garden
T2 အတွင်း level2မှာ ရှိပါတယ်။ ပန်းအလှဆင်မှုတွေ လှပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်သူများနဲ့ ရှုပ်ယှက်ခက်နေတဲ့ နေရာပါ။
၁၁။ Cactus Garden (ရှားစောင်း၊ ဇောင်းကြမ်း ဥယာဉ်)
T1 အတွင်း Level3မှာရှိပြီး လေယဉ်ပျံများ နောက်ခံထားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတယ်။
၁၂။ အမြင့် ၁၂ မီတာရှိ လျှောစီး
၁ စက္ကန့်ကို ၆ မီတာနှုန်းဖြင့် လျှောစီးလို့ရပါတယ်။ T3 public area မှာရှိတာပါ။ Airport မှာ ၁၀ ဖိုး ၀ယ်တဲ့ single receipt ၁ခု ပြနိုင်ရင် စီးလို့ရပါတယ်။
၁၃။ Information counter တွေမှာ free candy လည်းရသေးတယ်။
ဘယ်လိုနှံ့အောင် လည်ရမလဲဆိုတော့ စင်္ကာပူကပြန်ရင် အစေားဆုံး check in လုပ်ပြီးဝင်ပါ။ အတွင်းမှာ Terminal 1,2 &3ကို ဆက်သွယ်တဲ့ sky train ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်လေယာဉ် Gate ပိတ်ချိန်တော့ သတိထားပေါ့။ ၁ နာရီခွဲ အချိန်ပေးနိုင်ရင် နှံ့စပ်နိုင်ပါတယ်။
တခြားနိုင်ငံကနေ စ လုံးကိုဝင်ရင် ချက်ချင်းမထွက်ပါနဲ့။ Sky Train စီးပြီး ပတ်လိုက်ပါဦး။ baggage ရွေးရမယ်ဆိုပြီး စိတ်မပူပါနဲ့ ။ နောက်ဆုံး ကိုယ်အိတ်ပဲ ကျန်ပြီး တနေရာရာမှာ ပုံထားပါလိမ့်မယ်။ လုမရွေးရတော့ဘူးပေါ့။ အိတ်မှာ နာမည် အကြီးကြီးရေးထားဖို့တော့လိုတယ်။ တော်ကြာ မှားပါသွားရင် အချိန်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ။
မသိသေးသော သူငယ်ချင်းများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စွာ လည်ပတ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း….
6/22/2014 10:26:00 AM Myanmar-news
အတန်းပညာ ဆက်လက်မသင်ကြားနိုင်တဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးရဲ့ စင်္ကြန်နံပါတ် (၃) မှာ သူတို့ရောက်နေပါတယ်။
လမ်းဘေးစာသင်ဝိုင်း (ရန်ကုန်) ပရဟိတအဖွဲ့ကနေ စာသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လာရောက်သင်ကြားသူ ကလေးငယ် ၆၀ ရှိတဲ့အနက် ကလး ၆ ဦးကသာ အစိုးရကျောင်းကို တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာသင်ဝိုင်းတွေကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလမှာ စတင်သင်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းများ အတွက် အဆင့်လိုက် ချီးမြှင့်မည့် ဆုငွေများစာရင်း
6/22/2014 10:26:00 AM sport-news
6/22/2014 10:13:00 AM woman-health
ရင်းသားတွေသ ဘာဝအတိုင်း ဖွံ့ထွားတောင့်တင်းမနေဘဲ ပျော့အိတွဲကျလာတဲ့အခါမှာ မိမိကိုယ်ကိုဆွဲ ဆောင်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားလာရပြီး၊ လွန်စွာစိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်ရပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့် လာခြင်းက အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သော်လည်း၊ အချို့့သူ တွေမှာ အောက်ပါအကြောင်းများကြောင့် အရွယ်မလွန်ခင်ကတည်းက ရင်သားတွေပျော့တွဲလာကြရပါတယ်။
ခြောက်ဗူးတွေဝယ်ယူရရှိနိုင်၏) ပဲနံ့ သာပင်အမှုန့် ကို ရေနဲခပ်ပျစ်ပျစ်ဖျော်စပ်လိမ်းပေးပြီးနောက် ၁၅-မိနစ်ခန့့်အကြာရေအေး ဖြင့်သန့်စင်ဆေးကြောပါ။
(၃) ထောပတ်ဆီအနှစ်များက ရင်သားကိုတင်းရင်းစေတဲ့အပြင် ဖြူဝင်းလှပလာစေလို့၊ ၄င်းဆီအနှစ်ဖြင့် ၃-မိနစ်လောက် အသာ အယာလူးနယ်ပေးပါ။ နာရီဝက်ခန့်အကြာ